ဖေဖေ~မေမေ…ထမင်းစားပြီဧည့့််ခန်းဆောင်မှာ. TV ထိုင်ကြည့်နေတယ်
ဖေဖေကအနော့ကိုလှမ်းပြောပါတယ်….သမီး….အနက်ဖန်နေ့လယ် ၁နာရီ ဖေဖေစီးဝေးပွဲတက်၇မယ်…….ဖေဖေဘောင်းဘီအနက်ရောင်….မီးပူ…ပြန်ချောထားပေးနော်သမီး…ကြားလား…`။
~~~~~~ဒီနေ့စနေနေ့ကျောင်းအားရက်ဖြစ်တယ်.ခါတိုင်းစနေနေ့ဆိုအနော်ကအိပ်ပုတ်ကြီးတာတနေ့ကုန်လောက်ကိုအိပ်တာ…ဒီစနေတော့အိပ်လို့မရပါဘူး မနက်၁၀နာရီအိပ်ယာထပြီး…ဖေဖေဘောင်းဘီကိုမီးပူချောပေးပြီး…အ၀တ်ချိတ်ကောက်ကလေးနဲ့အသေအချာ..ချိတ်ဆွဲထားပေးလိုက်ပါတယ်…မကြာမှီ ဖေဖေနဲ့မေမေဈေးဝယ်ပြန်လာကြပြီး…ဖေဖေကရေချိုးနေပြီး…မေမေကထမင်းဝိုင်းပြင်ဆင်ထားနှင့်ပြီ…ဖေဖေရေချိုး.ပြီးဖေဖေနဲ့အတူး.မိသားစုထမင်း
ကံဆိုးချင်တော့လဲ…ဒီနေ့ဖေဖေအိမ်စောစီးစွာပြန်ေ၇ာက်နေတယ်….ဖေဖေကိုအနောတွေ့လိုက်တော့….ဟိုက်တေပြီ…ဖေဖေကအိမ်ဝကနေတုတ်တချောင်းကိုင်းပြီးသမီးတော်နှစ်ယောက်ကိုကြိုဆိုနေတယ် အနော်တို့ဘာပြောရမယ်မသိတော့ပါ…ကြောက်လွန်းလို့တုန်နေတယ်ဒူးတွေ…ဖေဖေကပြောတယ်….ကဲ…ဒီမှာလာရပ်လက်မြှောက်ထား…ဘယ်ကပြန်လာလဲ…ပြော….။။ အနော်ငိုချင်လာပြီ ခေါင်းကလေးတချက်ကုတ်လိုက်ပြီး.မရဲတရဲအသံတွေကလည်းတုန်ခါနေပြီ အနော်ကအတော်လေးဥာဏ်ကောင်းတာလေ…ဖေဖေသမီးတို့နှစ်ယောက်Y M C ကွင်းလယ်မှာရုပ်ရုင်သွားကြည့်တာပါပိုက်ဆံပေးဖို့မလိုဘူး.အလကားကြည့်ရတာပါဖေဖေ..။ ဟားဟားဟား…ဖေဖေကအသံကျယ်ကြီးနဲ့ရီပါလေရော….
သမီးတို့ဘာကြောင့်လူကြီးကိုညာ၇တာလဲ…သမီးတို့ထက်ကြီးလို့လူကြီးလုပ်တာလေ…..နေ့လယ်ကြောင်တောင်ကြီးပိတ်ကားဖြူထောင်ပြီးရုပ်ရုင်ပြလို့ရတာလား…ဟားဟားဟား…ဖေဖေကသဘောကျလို့ရီပြန်ရော….ကဲမှန်မှန်ပြောဘယ်ကပြန်လာလဲ…..။ အနော်ကထပ်လိမ်လို့မရတော့မှန်းသိလိုက်ပြီ…ဖေဖေကိုအမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်….သမီးတို့မြသုခရုပ်ရုင်ရုံမှာသွားကြည့်တာပါ…။ အေးအေး…ဒီတခါတော့ရှိစေ…နောက်ဘယ်တော့မှမသွားဒ၇ဘူး.ဖေဖေကိုဂတိပေး…..။ ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေ…ညီအမနှစ်ယောက်ခိုးကြည့်ပြီးပြုံးယောင်ယမ်းယုံလေးရှိသေးတာ….။ ကဲသမီးတို့စီးကမ်းဖောက်လို့ဖေဖေအပြစ်ဒါဏ်ပေး၇မယ်…ထိုင်ထ..နားရွက်ဆွဲ..အခါတရာ(၁၀၀)လုပ်….။
တေပီ….ဖေဖေ ရယ်..ရက်စက်လိုက်တာညီအမ နှစ်ယောက်ငိုရမလိုရီရမလို
Posted by roseayemaung at 10:28 AM
စံပယ်ချို July 18, 2012 at 11:22 AM
ထိုင်ထ အကြိမ်၁၀၀ လုပ်ခဲ့ပါတယ်
Maungmaunghtoo July 18, 2012 at 4:11 PM
ထိုင်ထအကြိမ် 100 ထဲနော် ကျနော်ဆိုရင် ခြေတွေဖင်တွေ ကြိမ်လုံးနဲ့အရိုတ်ခံရသေးတယ်..ဟဲ..ဟဲ... :(
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် July 25, 2012 at 10:52 PM
ကိုယ်လုပ်ချင်တာတော့ လုပ်လိုက်ရသေးတာပေါ့ ။
gina vinasoy July 30, 2012 at 8:01 PM
Your concept and issue is pretty good .Try to visit my website too. http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_
Koko Lashio August 11, 2012 at 9:39 AM
ကျနော်လည်း အဲလို ဆုံးမ တတ်တဲ့ အဖေ ရှိချင်လိုက်တာ
ပြီးတော့ မေမေနဲ. ဖေဖေနဲ. မိစုံ ဖစုံ လေးရှိရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲဗျာ
အဖေ ဘယ်ရောက်နေလည်း ဖေဖေဘယ်တစ်ယောက်နဲ. ယူသွားတာလည်းဖေဖေ
မေမေ ဘယ်တော့လောက်မှ အတူနေရမှာလည်း မေမေ